China Abavelisi bempompo abaqhutywa yimpompo nabathengisi | Impompo yedamei kingmech
Ubukhulu: DN25 ~ DN300
Intloko: ~ 300m
Ubushushu: ngaphantsi kwe-120 ℃
Uxinzelelo: 2.5 ~ 10MPa
Izinto eziphathekayo: Isinyithi yentsimbi, i-stainless steel 304/316/321 / 316Ti / 904L, iDuplex, Hastelloy, Titanium kunye neTitanium alloy njalo njalo
Impompo 1.Long shaft emanzini
Ubunzulu obunzulu obufakwe emanzini yi-7m.
Iimpompo zolwelo eziyingozi ziya kuthi zixhotyiswe ngegobolondo yokuthintela kabini, iya kuba yialam xa igobolondo lokuqala lokuqulatha laliyile.
4.I-shaft yokuqhuba ixhaswa kukuqengqeleka okuthweleyo, ukuzala okunokuthambisa kukuthambisa ioyile; Impompo shaft ixhaswa yi-hydraulic sliding bearing, isilayidi esityibilikayo sithanjisiwe ngumbhobho wokumpompa.
Impompo 5.Magnetic unako ukufikelela ngaphandle ukuvuza, oko's kufanelekile ukudlulisa izinto ezinobungozi, ezinobuthi, ezinokutsha, eziqhumayo, ezibizayo okanye ezilula i-gasification liquid. Ukongeza, impompo yemagneti ikwalungele ukuhambisa ubushushu obuphezulu, ulwelo lobushushu obuphantsi kunye nolwelo phantsi kwemeko yokucoca.
6.Iibhloko zemagnethi yempompo kazibuthe ikumgangatho ophezulu kunqabile emhlabeni okhoyo okusisigxina semagnethi-samarium cobalt, i-demagnetization engenakuphikiswa yeqondo lobushushu eliphezulu inokufikelela kwi-400-450 ℃, iqinisekise ngokupheleleyo ukudityaniswa kwemagnethi kunye nokusebenza okuthembekileyo. Xa isebenza ngesiqhelo, ukuhlangana kwemagnethi kunye nenqanaba lesithathu lokungenisa iimoto zisebenza ngokudibeneyo kwaye inentsebenzo ezinzileyo. Intoni's ngaphezulu, umazibuthe osisigxina uzinzo oluphezulu kakhulu, kwaye unokuthintela umonakalo ngexesha lendibano kunye ne-dis indibano yeerotors okanye impompo esebenza kwi-torque ephezulu.
7.There ngokuhambisa ethwele kwimpompo magnetic, ngoko ke'Ilungele ukusebenza ngokuqhubekekayo. Zama ukunqanda amaxesha okuchaza, ihlala ingadluli kumaxesha ali-10 ngeyure. Emva koko inokunciphisa lingonakali ekutyibilikeni ngokuzala ngexesha lokuqala nokumisa, kwaye yandise ubomi bayo bokusebenza.
8.Kuba impompo yamaqondo obushushu aphezulu, kukho indawo eyandisiweyo phakathi kwempompo kunye nokuhlangana kwemagnethi, okwenze umjikelo ozimeleyo.
Ngelixa lokusebenza, amandla ompu wemagneti ombane ngokuzenzekelayo ibhalansi ngamandla e-hydraulic, i-disc yokuthwala kuphela ukuthwala i-axial thrust yangoku xa impompo iqala kwaye imisa.
Egqithileyo Impompo yeMZ Magnetic Drive
Okulandelayo: MMC Magnetic Impompo eqhutywa
Impompo eqhutywa nguMG Magnetic